Ebumnuche Azụmaahịa 15 Iji Jiri Twitter | Martech Zone
Ebumnuche Azụmaahịa 15 Iji Jiri Twitter
Satọdee, Nọvemba 28, 2009 Saturday, October 25, 2014 Douglas Karr
Ulo oru na-aga n'ihu na-agbasi mgba ike na ihe kpatara iji jiri Twitter. Bulie otu oyiri nke Twitterville: Otu ulo oru ahia nwere ike isi mee nke oma na New Global Neighborhoods by Chebe Israel. Ọ bụ akwụkwọ magburu onwe ya nke na-edepụta ọmụmụ na uto nke Twitter dị ka usoro ọhụụ ọhụụ dị egwu maka azụmaahịa iji kwurịta okwu.
Ka m na-agụ akwụkwọ ahụ, Shel kwuru ọtụtụ ihe kpatara ụlọ ọrụ ga-eji iji Twitter. Echere m na ọtụtụ n'ime ha kwesịrị ịdepụta… yana ụfọdụ mkparịta ụka… yana ụfọdụ ndị ọzọ.
Na-ekesa Kupọns na Onyinye - ebe ọ bụ na Twitter bụ usoro nkwukọrịta ikike, ọ bụ ụzọ zuru oke isi kesaa onyinye. Ezigbo enyi Adam Obere ahụwo nke a n'ụlọ nri na ụlọ ọrụ ụlọ - ebe a Nchikota Mobile Mata, Twitter, Facebook, gingde blọgụ na syndication nyeere-eto eto niile nke ya ahịa 'ulo oru… mgbe na a ala ahịa!
Na-ekwurịta okwu na ndị ọrụ - kama ijikọ sava email ma ọ bụ igbu oge ndị mmadụ na ụlọ nzukọ, Twitter bụ nnukwu ọrụ mmekorita. N'ezie, ọ bụ ya mere o ji bụrụ mbu nke Odeo kere n'okpuru aha Twttr (m na e ama osụhọde maka obere dee maka SMS!)
Nata Mkpesa Ndị Ahịa - ụlọ ọrụ na-alụ ọgụ mgbe niile iji zere ịsa uwe ha ruru unyi n'ihu ọha. Ihe isi ike bụ na ndị na-azụ ahịa ekwela na 5-kpakpando ọrụ ọzọ. Nkwalite na nkatọ kachasị ike nke ụlọ ọrụ na-abịa mgbe nzaghachi ha… ma ọ bụ arụghị ọrụ. Site na ịnabata mkpesa ndị ahịa n'èzí, ndị ahịa ndị ọzọ nwere ike ịhụ ụdị ụlọ ọrụ gị n'ezie bụ.
Chọta ma ọ bụ biputere ọrụ - Ndị na-ewe ndị ọrụ na ndị na-achọ ọrụ na-eji Twitter iji biputere banyere ọrụ achọrọ ma ọ bụ oghere ọrụ. Site na nyocha mpaghara, ị nwere ike ịchọta ebe ị na-achọ ịchọta ọrụ ma nwee ike ikpokọta okwu ndị ọzọ maka ọchụchọ gị.
Ozi kingchọ na ringkekọrịta - Laa azụ mgbe m nwere ihe karịrị otu puku ndị ọbịa, Twitter ghọrọ a nnukwu ihe ọzọ maka engines ọchụchọ. Google achọpụtala nke a, ijikọta obodo gị n'ịntanetị n'ime nsonaazụ ọchụchọ. Dịka, azịza m nwetara dị ezigbo mkpa n'ihi na ndị na-eso m na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ m.
Atụmatụ Inbound Marketing - mgbe anyị na-arụ ọrụ na Compendium, anyị malitere ịchọpụta ọnụọgụ na ogo nke ụzọ mbata nke batara na saịtị anyị site na Twitter nwere ike ịgbanwe karịa site na ọchụchọ. Agbanyeghị na igwe nchọta nyere anyị ọtụtụ ndị ọbịa, anyị bidoro ịdụ ndị ahịa ọdụ ka ha banye Twitter ma gbanye nri ha site na ngwaọrụ dịka. Hootsuite or Ikwusa ozi.
Anizụlite Humanizing - ụlọ ọrụ ndị na-enweghị mmekọrịta ọ bụla na ndị ọha na eze na-achọpụta na ịnye aka mmadụ dị mma maka azụmaahịa ma chọọ maka njigide ndị ahịa. Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-alụ ọgụ na ịnye mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma bụrụ ndị agụụ na-agụ, Twitter bụ ezigbo usoro. Ekwesighi ileba ya anya ụbọchị niile (agbanyeghị na m ga-adụ ya ọdụ… ọsịsọ ọsọ na-enweta oohs na aahs), mana nzaghachi nke ụlọ ọrụ na-enweghị ihu site n'aka onye nwere avatar na-adị mma mgbe niile.
Nkọwa nke Onwe - tinyere azụmaahịa humanizing bụ ikike ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nwe azụmaahịa na-ewu kwa akara nke aka ha. Iwuli a onwe ika online pụrụ iduga ọtụtụ ihe… ma eleghị anya ọbụna na-amalite gị n'ụlọnga! Bụrụ ọdịmma onwe gị maka ọrụ gị. Ọtụtụ mmadụ ndị na-echegbu onwe ha gbasara ihe ụlọ ọrụ ha nwere ike iche ma ọ bụrụ na ha apụnara ọha mmadụ na-achọzi ọrụ n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ chụrụ ha n'ọrụ.
Njikwa Nchọgharị Twitter na Hashtags - ọchụchọ na Twitter na-adịwanye nkịtị. Chọta site na iji hashtags nke ọma na Tweets ma ọ bụ na usoro nrụrụ aka gị.
IZIRingTA Irè - ịkparịta ụka n'onlinentanet bụ nnukwu ihe ntanetị maka ịkparịta ụka n'ịntanetị. Enweghị m ike ịgwa gị ọtụtụ olile anya m zutere site na Twitter. Offọdụ n'ime anyị maara ibe anyị ruo ọtụtụ ọnwa tupu anyị ejikọ njikọ na-anọghị n'ịntanetị, mana ọ na-eduga na mmekọrịta mmekọrịta azụmahịa dị ukwuu.
Ahịa Viral - Twitter bu nke kachasi ahia n’ime oria. The Retweet (RT) bu ngwa di egwu di egwu… na-aputa ozi gi site na netwok gaa na ntaneti na ntaneti n'ime ihe nkeji. Amachaghị m na e nwere ngwa ngwa ịrịa ngwa ngwa na ahịa ugbu a.
Nchịkọta ego - Shel dere ụfọdụ ezigbo ihe atụ nke otu ụlọ ọrụ sirila jiri Twitter rụọ ọrụ nke ọma. Uru ahụ bụ maka azụmahịa na ọrụ ebere - ebe ọ bụ na ekwuputara itinye aka na azụmaahịa ahụ na Twitter karịa ka ha mere kpọtụrụ aha na saịtị weebụ ebe.
Nhazi Onlinentanetị - Ewezuga Kupọns na onyinye, ụfọdụ folks na-ewerekwa iwu ndị ahịa na ntanetị. Shel na-ede banyere ụlọ ahịa kọfị ebe ị nwere ike Tweet na iwu gị wee gaa bulie ya. Dị jụụ!
Mmekọrịta ọhaneze - Ebe ọ bụ na Twitter na-arụ ọrụ na ọsọ nke ịde mkpụrụ edemede 140, ụlọ ọrụ gị nwere ike ịga n'ihu onye ọ bụla… asọmpi, mgbasa ozi, na-asọ asọ… site na ịnwe atụmatụ PR na-eme ihe ike na-etinye Twitter. Mgbe i buru ụzọ mee ọkwa, ndị mmadụ na-abịakwute gị. Ahapụla ya na mgbasa ozi ọdịnala ma ọ bụ blogger iji nweta ihe ziri ezi… jiri Twitter nye iwu ma duzie nkwukọrịta ahụ.
Na-ekwupụta Nkọwa - enwere nsogbu na ụlọ ọrụ gị ma chọọ ikwurịta okwu na ndị ahịa gị ma ọ bụ atụmanya? Twitter nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ isi mee nke a. Pingdom agbakwunyela Mata Twitter ka ọ bụrụ ọrụ services kedụ ezigbo echiche! Ewezuga… mgbe Twitter gbadara ha enweghị ike iji ọrụ 😉 Itinye anya nwere ike bụrụ nnukwu ihe… ikekwe iji gwa ndị ahịa gị na ngwaahịa laghachi na ngwaahịa.
Shel kwuru na ụfọdụ azụmaahịa eji eji akwụkwọ ya enweghị ike ịkọwa ozugbo na ego ha nwetara. Ọ bụ ezie na nke a bụ eziokwu, enwere ike ịtụ ha ma laghachi na itinye ego na itinye ego. Ekwenyesiri m ike na ngalaba ọrụ ndị ahịa na-enyocha olu oku na Tweets nwere ike ime ụfọdụ ụdị iji chọpụta ma ọ bụrụ na Twitter na-ebelata oke olu oku ebe ọ bụ na azịza ya bụ nke ọha. Dị ka ọ dị na # 15… ọ bụrụ na saịtị m agbadata ma ọ bụ Tweeted… mgbe ahụ ndị folks ahụ agaghị enwe ike ịkpọ m ka m gwa m ebe ha hụrụ na egosipụla m okwu a.
Tags: Kupọnsmkpesa ndị ahịaegonkwukọrịta ọrụchọta ọrụinbound marketingozi achọ-enye-ekere òkèChebe IsraelTwitterAnyi
Nsogbu Na-enweghị “Nkwupụta”
Nov 29, 2009 na 12:36 AM
Chaị, nke a bụ nnukwu ndepụta Douglass. "Gịnị ka m na-efu?" ọ dịka ọ bụ ụzọ ziri ezi isi mechie post a ka ihe niile m nwere ike iche na-etinyelarị ebe ahụ. Aga m agwa gị ihe m na-efu >> akwụkwọ a na shelf m. Nke atọ post taa ọ na-e kwuru mere m na-maa-enye ya a Buy a izu ụka. Daalụ maka ozi ahụ. –Paul
Nov 30, 2009 na 12:53 PM
Bet nzọ, Paul! Ọ bụ nnukwu akwụkwọ - nwee obi ụtọ na ị na-etinye ya na listi ahụ.
Nov 29, 2009 na 1:49 PM
Lee nnọọ egwu post Douglas! Daalụ maka inyekwu anyị mgboagha maka ịre ahịa Twitter na mgbasa ozi mgbasa ozi na ndị ahịa anyị.
Daalụ Oscar! Na-akpali mmasị na anyị ka chọrọ mgboagha, ọ bụghị ya?
Site na E-mail Nkwukọrịta Azụmaahịa. FYI.
Nov 17, 2011 na 7:51 PM
Ndị a bụ nnukwu ihe, ha egosipụtala eziokwu na ụlọ ọrụ anyị. Maka na anyị bụ ụlọ ọrụ nyocha ntanetị, ndị mmadụ na-abịakwute m site na Twitter na Facebook na nsogbu ha dịka oge niile ha na-akpọ nkwado ndị ahịa. You makwaara nke ahụ, n'ihi na enwere m mmetụta ijikọ ha na netwọkụ mmekọrịta, ana m agba mbọ na m lebara mkpesa ha anya. Anyị enweela ọtụtụ nzaghachi dị mma site na nke a, na ahụmịhe m, ọ na-eme ka anyị nwee ezi mmekọrịta obodo. Azụmaahịa ọ bụla na-abụghị na Twitter ụbọchị ndị a na-efu n'ụzọ dị ukwuu!